Muujiyeyaasha Sahfiyeyaasha Iyo CCI Ganacsi ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah | vfxAlert official blog
Modommodity Сhannel Index (CCI) - guri laaan, haa macaash
Waad salaaman tahay, ganacsade! Waxaan sii wadeynaa inaan adeegsanno sida loo sameeyo istaraatiijiyado ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah leh markii aan la ganacsaneyno isbedelka. Waxaan go'aan ka gaari doonnaa goorta aan ku fureyno ikhtiyaarka isbeddellada isbeddellada iyo tilmaame Badeecadda Channel Commodity.
Nooca : Isbeddellada.
Waqtiga : Mid kasta oo ka mid ah inta u dhexeysa M1-M5. Xaaladdeenna, M1 waa la isticmaalay, laakiin muddada falanqaynta ee sii kordheysa, saxnaanta calaamaddu way sii kordheysaa.
Hantida ganacsiga : Ikhtiyaar kasta oo ganacsi calaamadaha . Shuruudda ugu weyn waa go'an (2-3 dhibic) faafitaan iyo lacag la'aan qarsoon.
Waqtiga ganacsiga : Dhammaan kulammada ganacsiga ee Forex.
Ikhtiyaarka khidmadda boqolkiiba : Aan ka yarayn 70-75%.
Istaraatiijiyaddu waxay isticmaashaa laba tilmaamood oo farsamo:
Ubax Tilmaamaha Bill Williams ayaa go'aamin doona isbedelka hadda socda ama maqnaanshihiisa. Waa seddex celcelis guuritaan leh eexasho ka duwan qiimaha hadda jira. Dhaqdhaqaaqa dambe ee dhammaan khadadka ayaa muujinaya maqnaanshaha isbeddel, waxaan ku sii jirnaa bannaanka astaamaha binary otomaatiga ah .
Index Channel Commodity (CC I). Tilmaame farsamo oo laga heli karo dhammaan ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo toos ah , oo muujinaya inta qiimaha uu ka leexday celceliskeeda celcelis ahaan tiro cayiman. Haddii qiimaha uu ka leexday wax ka badan inta udhaxeysa (+ heerarka 100 / -100), waxaan rajeyneynaa isbedel dhanka isbedelka ah. Tani waxay noqon doontaa xaqiijintii ugu horreysay ee aaladda Alligator. Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan tilmaamaha barta .
WAC (UP) - ikhtiyaar . Qiimuhu wuxuu ka sareeyaa Alligator, oo soo baxay. CCI wuxuu ka sarreeyaa heerarka eber, isagoo xaqiijinaya kor u kaca.
PUT (DOWN) - xulasho . Xaaladaha iska soo horjeedda: dhammaan khadadka Alligator waa la diiday. Qiimuhu wuu ka hooseeyaa dhammaan celceliska guuritaanka, ee oscillator-ka hoos u dhaca ka hooseeya heerarka eber.
Fur ganacsi shumaca xiga ka dib calaamadaha binary. Waqtiga uu dhacayo ikhtiyaariyada waa in uusan ka yarayn 5-7 daqiiqo xitaa haddii waqti shaqeed ahaan loo doorto daqiiqad, sida fiidiyowgeena .
Talooyinka ku saabsan isticmaalka…
Qiimaha muddooyinka loogu talagalay suuqyada loo yaqaan 'cryptocurrency currency' waa in si gaar ah loogu xusho hanti kasta, iyadoo la tixgelinayo celceliska isbeddelka, waqtiga shaqada, istiraatiijiyad ganacsi (isbooris, isweydaarsi ganacsi, ganacsi dhexdhexaad ah ama muddo dheer ah) waxayna kuxirantahay ganacsiga raaxada leh qaabka ganacsadaha.
Waxaad si weyn u hagaajin kartaa natiijada istiraatiijiyadda haddii aad isticmaasho kombiyuutarada ganacsiga oo leh kormeerayaal badan . Tusaale ahaan, muddooyinka M5-M15 waxay bixin karaan calaamado qarsoon oo ku saabsan isbeddelka isbeddelka, kaas oo markaa lagu xaqiijiyo ganacsiga M1.
Intii lagu guda jiray daabacaadda wararka aasaasiga ah iyo tirakoobka, ma fureyno xulashooyin 30 daqiiqo ka hor warka iyo 30 daqiiqo ka dib daabacaadda; ganacsatada taxaddarka leh way xiri karaan heshiisyada hadda socda. Si loo xakameeyo dhacdooyinka, waxaan u isticmaalnaa jadwalka dhaqaalaha ee ku jira dhammaan barnaamijyada ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah ee bilaashka ah bilaash !
Inkasta oo tirakoobyada wanaagsan iyo ku guuleysiga calaamadaha binary ee Forex iyo cryptocurrency , ha iloobin in goobaha tilmaamaha CCI loogu talagalay asal ahaan loogu talagalay keydka meertada iyo mustaqbalka, halkaas oo xilliyada caadiga ah ee isbeddelada qiimaha ee ugu badnaan si fudud loo go'aamiyo. Isbeddellada sare, tani waxay ka dhigan tahay inaad u baahan tahay inaad raadiso ugu yaraan hal xaqiijin dheeri ah oo leh qalabka isbeddelaya sida Alligator, oo xisaabiya habdhaqanka suuqa iyadoo la adeegsanayo habab kale.